ब्याज दर स्वैप के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki ब्याज दर स्वाप
तपाईंलाई एउटा क्रेडिट चाहिन्छ? अब तपाई विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। क्रेडिट को लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं फिर्ता तिर्नुहुन्छ। कुनैपनि अवस्थामा, तपाइँसँग यो गर्नका लागि पर्याप्त पैसा पक्का राख्नुहोस्। अब त्यहाँ भनिन्छ ब्याज दर स्वाप, यो प्रायः तपाईंको मामिलामा फायदेमंद छ, तर यो पनि एक हानिकारक प्रभाव हुन सक्छ। तिनीहरूले एक निश्चित ब्याज दर तिर्न सक्दैन, जस्तै धेरै ऋणहरू, तर सम्झौतामा एक मान रेकर्ड।
यद्यपि, लगातार परिवर्तन हुन्छ। यही छ, मार्केटमा ब्याज दर मासिक वा तिमाही परिवर्तन गर्दछ र यो कसरी निर्भर छ, तपाइँलाई अधिक वा कम चासो तिर्न पर्दछ। तथापि, मूल क्रेडिट सम्झौतासँग यसको साथ केहि छैन। यो ब्याज दर स्वैप द्वारा अप्रत्याशित बनी रहन्छ, र यो तपाईंको लागि निश्चित रूप देखि लाभदायक छ। यस तरिकाले तपाइँले ऋण फिर्ता तिर्न सक्नुहुन्छ। कुनैपनि अवस्थामा, तपाईंले ब्याज दर स्वैप गर्नु अघि पहिले दुवै पक्षलाई हेर्नु पर्छ। तपाईंको आफ्नै बैंक सल्लाहकार यसका लागि ठीकसँग सही सम्पर्क हो। त्यसोभए तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो सायद अघि बढि आफैलाई सूचित गर्न सार्थक छ। त्यसैले तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाई सबैलाई आफ्नै योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाईं यसमा साँच्चै राम्रो हुनुहुन्छ र तपाईले सँधै ब्याज दरलाई फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईंले चाँडै तिर्न चाहेको कुरा थाहा छ र धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याज दर स्वैप निश्चित रूप देखि तपाईंको लागि एक राम्रो विकल्प हो यदि तपाईं केहि जीतना चाहते हो। तथापि, तपाईंले यस प्रकारको प्रणालीको फाइदाहरू मात्र देख्न नसक्नु हुन्छ, तर हानि पनि। आज यो धेरै कानुनी लेनदेनको बारेमा हो, जुन राम्रो चल्न सक्छ। तपाइँ सँधै तपाईको अवधारणाहरु को बारे मा अवगत हुनु पर्छ।
केवल यदि तपाईं पक्का हुनुहुन्छ भने तपाईं राम्रो सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ र यसको धेरै पनि हुनेछ। ब्याज दर स्वैपले तपाईंलाई लाभ दिन सक्छ। तर तपाईं एक्लै निर्णय गर्नुहुन्छ कि यो तपाईंको लागि सही कुरा हो। तपाईं राम्रोसँग वजन छ, किनकि सबैभन्दा खराब मामलामा तपाईं पैसा गुमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले चर ब्याज दर यसैले केहि कुरा हो कि तपाई एक सल्लाहकार संग छलफल गर्नु पर्छ। तपाईंले यो अप्ठेरोको लागि समय लिनु पर्दछ र त्यसपछि सबै कुरा राम्ररी व्याख्या गर्न पाउनु हुन्छ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने, तिनीहरूलाई तुरुन्त सोध्नुहोस्।
बैंक सल्लाहकार ब्याज दर स्वैप को फायदे र हानि को व्याख्या गर्न को लागी खुशी हुनेछ। त्यसैले तपाईं पूर्णतया निश्चित हुनुहुन्छ कि कुनै पनि चीज छुट्याउन र अवस्थित सबै सम्भावनाहरू प्रयोग गर्न को लागी। तपाईंले साइन इन गर्नु अघि सम्झौता हेर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाईं निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाईं गलत हुनुहुन्न। अनुबंध तपाईंको निपटानमा छ र त्यसोभए तपाईं पनि एक वकील संग कागजात जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले यो सम्झौता राम्रोसँग समीक्षा गर्न नियुक्ति बनाउनु पर्छ। आज भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ सबै सम्झौतामा नजिकको हेर्नको लागी। अधिकतर अवस्थामा, बैंकको आफ्नै बैंकद्वारा क्रेडिट उत्पन्न हुन्छ। केवल जब तपाईं राम्रो भावना छ भने तपाईं ब्याज दर स्वैप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईलाई राम्ररी हेर्न र सम्झौता राम्रो तरिकाले पढ्नुपर्छ। यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, तपाईंले राम्रो अन्तस्करणमा साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न र निश्चित ब्याज दर प्रयोग गर्नुपर्दैन।
दर्जा: 3.5/ 5।2चुनावबाट।
अघिल्लो लेखमासिक दर
अर्को लेखएसी छुट क्रेडिट